Barcelona oo si xun u xasuuqday kooxda Huesc xili Messi iyo Suarez ay min LABA gool dhaliyeen – Gool FM
Barcelona oo si xun u xasuuqday kooxda Huesc xili Messi iyo Suarez ay min LABA gool dhaliyeen
CR Shariif September 2, 2018
(La Liga) 02 Sab 2018. Kooxaha Barcelona ayaa guul raaxa leh ka gaartay kulankeeda saddexaad ee horyaalka La Liga xili ciyaareedkan dhigeeda Huesca oo marti ku ahayd garoonka Cump Nou, kadib markii ay ku xasuuqday 8-2.
Kooxaha Barcelona iyo Huesca ayaa kulanka oo ahaa koodii saddexaad ee horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan ku bilaawday si cajiib ah waxaana labada dhinac soo martay fursado cajiib ah.
Qeybtii hore ee ciyaarta kooxda martida ahayd ee Huesca ayaa kaga naxsatay Barcelona goolka daah furka ciyaarta waxaana u dhaliyay Juan Camilo Hernandez, daqiiqadii 3-aad, kadib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Samuele Longo.
Laakiin kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa daqiiqadii 16-aad ee ciyaarta u keenay goolka barbaraha kadib markii uu caawin ka helay Ivan Rakitic wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1.
Isla qeybta hore ciyaarta kooxda Barcelona ayaa heshay goolkeeda 2-aad ee ciyaarta daqiiqadii 24-aad wuxuuna goolkan ahaa miduu iska dhaliyay laacibka kooxda Huesca Jorge Pulido.
Markale Barcelona ayaa la timid goolkeeda 3-aad daqiiqadii 39-aad waxaana markan u dhaliyay Luis Suarez oo isna markiisa caawin ka helay Jordi Alba ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 3-1.
Laakiin ku dhawaad dhamaadka qeybtii hore ee ciyaarta kooxda Huesca ayaa la timid gool daqiiqadii 42-aad waxaana u dhaliyay laacibkooda Alex Gallar kaasoo ciyaarta ka dhigay 3-2.
Qeybtii hore ciyaarata ayaa lagu kala nastay 3-2 ay ku hogaamineyso Barcelona oo kulankan ku ciyaareesay garoonkeeda Cump Nou.
Laakiin marka dib leysugu soo laabtay qeybtii labaad kooxda Barcelona ayaa kusoo gashay ciyaarta si der der ah, si ay natiijo fiican kaga gaarto kulankan.
Daqiiqadii 48-aad Barcelona ayaa heshay goolkeedii 4-aad ee ciyaarta waxaana u dhaliyay laacibkeeda da’ada yar ee reer France Ousmane Dembele oo ciyaarta ka dhigay 4-2, waxaana goolkan ka caawiyay Luis Suarez.
Intaas kadib kooxda martida ahayd ee Huesca ayaa u muuqatay mid aad u niyad jabtay kadib markii uu Ivan Rakitic ka dhaliyay daqiiqadii 52-aad goolkii 5-aad ee ciyaarta, wuxuuna ka dhigay ciyaarta 5-2.
Laakiin sheeko waxay is badashay kadib marka uu Lionel Messi daqiiqadii 61-aad uu ka dhaliyay goolkii 6-aad ee ciyaarta, ahna goolkiisii 2-aad ee kulankan, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 6-2, xili caawinta goolkan uu lahaa Philippe Coutinho.
Kulankan oo ahaa mid hal dhinac kaliya ah ayay markale Barcelona la timid goolkeedii 7-aad daqiiqadii 81 waxaana u dhaliyay difaaceeda garabka bidix ee Jordi Alba oo ciyaarta ka dhigay 7-2, kadib markii uu kubadan si qurux bdan kaga soo shaqeeyay Messi.
ugu dambeyn gaba gabada ciyaarta Barcelona ayaa markale heshay rigoodhe uu garsoorka ciyaarta ku abaal maray kadib qalad lagu galay Suarez waxaana ugu dambeyn gool u badal daqiiqadii 90-aad Luis Suarez oo ciyaarta ka dhigay 8-2.
Romelu Lukaku oo soo bar-bareeyay goolasha Didier Drogba ee horyaalka Premier League
“Ma aanan diidin saxiixa Cristiano Ronaldo”… Jose Mourinho